२४ माघ २०७३, सोमबार ०४:३०
डा. विनय रेग्मी साधारणतया जोर्नी दुख्ने समस्यालाई हामी बोलीचालीको भाषामा बाथ रोग भन्छौं । जोर्नी दुख्नेलाई मात्र बाथरोग भनिन्छ कि यसका अरु पाटो पनि छन् ? बाथ रोग किन हुन्छ ? यसका लक्षण के-के हुन् भन्ने प्रश्न हाम्रो मनमा उब्जिरहेको हुन्छ । रोगबारे.....
४ माघ २०७३, मंगलवार ०५:५०
- डा. ललितकुमार मिश्र, काठमाडौं पुस १९, २०७३- हुन त खोकी आफैंमा कुनै छुट्टै रोग होइन । तर खोकी शरीरभित्र पलाईरहेको कुनै अन्य रोगहरुको लक्षण भने अवश्य हो । सामान्य रुघादेखि लिएर दम, टी.बी र क्यानसर जस्ता भयकंर रोगहरुमा पनि खोकी लाग्ने गर्दछ । खोकी लाग्नु.....
६ पुष २०७३, बुधबार ०६:१०
डा. लालित कुमार मिश्र पुस ५, २०७३- जाडोको महिनामा लगभग सबैजसो प्राईभेट क्लिनिक तथा सरकारी अस्पतालमा विन्टर डायरिया अर्थात हिउँदमा हुने झाडापखालाका रोगिहरुको चाप निकै बढेको हुन्छ। जसमा नवजात शिशु र कम उमेरका केटा-केटीहरुको संख्या बढी हुन्छ । गर्मियाममा.....